Maraykanka oo difaacaya danahiisa Ciraq - BBC News Somali
Image caption Madaxwaynaha Maraykanka Obama
Aqalka Cad ee looga arrimiyo waddanka Mareykanka ayaa sheegay in Madaxweyne Obama uu meelmariyay duqeymaha xaga cirka ah ee Mareykanka ay ku hayaan maleeshiyaadka Dawladda Islaamiga ah ee jooga meel u dhaw biyo xireenka Muusil.
Aqalku waxa uu sheegay in weerraradaasi lagu taageerayo ciidammada ammaanka ee Ciraaq ee dadaalka ugu jira sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen goobtaasi muhiimka u ah biyaha iyo korontada.
Saraakiishu waxa ay sheegeen in go'aankaasi uu xaqiijinayo sida uu Mareykanka u doonayo inuu difaaco muwaadiniinta iyo danaha Mareykanka ee Ciraaq.
Tan iyo markii uu Mareykanku faragalinta ka bilaabay waqooyiga Ciraaq toban maalmood ka hor, ayaa waxa ay si taxadar leh uga fiirsanayaan erayada ay adeegsanayaan.
Aqalka Cad ayaa caddeeyay in ujeedada weerrarada xaga cirka ah ee ay ku qaadayaan Dowladda Islaamiga ah ay tahay in ay ilaaliyaan danaha iyo shakhsiyaadka Mareykanka ah.
Saraakiisha ammaanka ee Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in burburinta biyo xireenkaasi ay sababi karto inay fatahaad weyn ka gaystaan magaalada Muusil iyo suuragalnimada inay gaaraan qeybo ka mid ah magaalada Baqdaad, halkaasi oo ay ku taallo safaaradda Mareykanka.
Walaaca rasmiga ahse waxa uu yahay in gudaha Mareykanka aanan laga danaynayn faragalin milateri oo ballaaran oo Mareykanku uu ka gaysto gudaha Ciraaq.
Xilli maamulka madaxweyne Obama uu sheegayo in ay sii wadi doonaan la tashiga ay Koongareeska kala tashanayaan dadaalada lagu bartilmaameedsanayo dagaalyanahada jihaad doonka ah ee Dowladda Islaamiga ah.